Ndakaedza kuita organic SEO, asi maitiro angu eOO organic haashande. Ndoita sei?
Zvinouya pasina kutaura kuti chinangwa chekupedzisira chehutano hwe SEO ndechekuwana kubudirira nekugara kwenguva refu mumugwagwa. Zvinoreva kuti kana chinangwa chemhando yakakodzera yeOOO inoshandiswa zvakanaka, webhusaiti yako inofanira kuona nhamba inokura yevashanyi chaivo, inounzwa pamapeji ako webhupano zvakananga kubva pakurongwa kweGoogle tsvaga (iyo SERPs). Asi chii chinofanira kuitika, kana zvikaitika kuti maitiro eOOO mauri kushandisa achange akundikana kuunza chimwe chinowedzera kuwana mumugwagwa? Kana zvichiitika saizvozvo, pasi apa pane pfupi mutsamba yezviito zvaunogona kuedza nekugadzirisa mamiriro ako pachako.
Pamberi pezvimwe zvinhu, ndinokurudzira kuongorora webhusaiti yako kuti uwane chirango chinowanikwa neGoogle. Inogona kuongororwa zviri nyore, sezvo kazhinji mutambo wakadaro unouya neyekutsvaga muGoogle Search Console. Izvi zvinofanira kuitika kuti mapeji ako ewebhu akangodaro akarasikirwa nemugwagwa (zvichida nekuda kwezvinhu zvisina simba kana zvisingaenzaniswi, spammy, kana grey-hat SEO zvirongwa), iwe zviri nani kuva nekugadzirira-kugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza.
Sezvo iwe uchiri kuoneka zvakajeka kubva kune chero zvipi zvayo zvinotangwa neGoogle, unofanirwa kuongorora nzvimbo huru dzewebsite yako, iyo yakatarisana nehotera huru mumutokari. Kune rumwe rutivi, kana kuwa kwakadaro kuchiita kunge kuchiwedzera, zvinowanzove kuti une dambudziko nemamwe mazwi makuru kana keyfrases iwe uri kushandisa zvisina kunaka kwezvikamu zvakati zvewebsite yako. Kana zvisina kudaro, kana maronho ako emotokari achiita seakabatana neimwe peji yewebhu, unokurudzirwa kuti uongorore mazamu epeji. Zvingangodaro kuti maitiro ako eOO organic akamira achiunza hufambiro hwakatowedzera, kunyanya kuburikidza nekudarika kwekudzokera shure.
Zvadaro, unofanirwa kuongorora kupikisa kwako kwewebsite, pamwe nekuchinja kwakanyanya kunogona kuitika kuburikidza nemwedzi miviri kana mitatu yapfuura. Mamiriro ezvinhu akadaro anowanzoitika kana panguva yekutanga kwemazuva ekutanga-kutanga-kana kana iwe uri kubatanidzwa mune zvepamusoro-tech kana purogiramu dzekufambisa mapurogiramu umo kunowanikwa muchero wemakwikwi ndiro yakaipisisa. Chokutanga pane zvose, chengetedza nzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo dzemashoko makuru ekuti uone kunyanya munzvimbo dzakakwikwidzana nadzo dzekukwikwidza zvakakwanisa kutungamira. Zvichida vane zvigaro zviri nani zviri nani kana kuti humwe hukama hwehutano? Cherechedza, zvisinei, kuti kufunga kukuru kunogona kunge kuri nyore - makwikwi ako angangodaro akaisa mari muhupenyu hwavo hwe SEO huripo kuti vatonge nzvimbo dzenyu dzekare dzekutungamirira. Kana zvikaitika saizvozvo, ndinoratidzira kutarisa pane mamwe maitiro kusvika kune musoro kuti ndikunde makwikwi acho mune imwe niche yako yemazuva ano, kana iwe unogona zvine tsanangudzo yakadzama yezvinyorwa zvinyorwa kuti usarudze mumwe, mamwe mazwi akareba mashizha mazwi kana mazwi tanga kutora marwadzo ako kumashure.
Pashure pezvose, maitiro ako ezvino e SEO anogona kurasikirwa nemhepo, nekuda kwezvimwe zvikonzero. Somugumisiro, makwikwi ako anogona kunge ari kutora mutungamiri pasina chinangwa chake. Nenzira iyo, iwe unorayirwa kuti udzokere kumapeji ako ewebhu uye udzidze zvavanoita pakuvakwa kwekubatanidza uye pa-site zvakagadzirwa zvakare Source .